वरिष्ठ नेताहरुले कहाँबाट मतदान गर्दै छन ? - Everest Dainik - News from Nepal
वरिष्ठ नेताहरुले कहाँबाट मतदान गर्दै छन ?
काठमाडौं, मंसिर १० । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निवार्चनमा प्रमुख दलका केही वरिष्ठ नेताले आइतबार मतदान गर्दै छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले गोरखाबाट आज मतदान गर्दै छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका गोरखा–२ का उम्मेदवारसमेत रहेका भट्टराईले पालुङटार नगरपालिकाको अन्नपूर्ण मावि, खोप्लाङ मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्दै छन् ।
भट्टराईसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका–८ जौबारी मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्दै छन् ।
याे पनि पढ्नुस मतदानको समय सकियो, ६२ देखि ६५ प्रतिशत मतदान भएको अनुमान
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणााले सिन्धुपाल्चोकबाट मतदान गर्दै छन् । सुनकोसी गाउँपालिका–२ को महेन्द्रोदय उच्च मावि मतदान केन्द्रमा पुगेर उनले मत खसाल्नेछन् ।
त्यसैगरी नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिका–३ नारायणी उच्च मावि केन्द्रमा मतदान गर्दै छन् । उनी ताप्लेजुङका एमाले उम्मेदवारसमेत छन् ।
याे पनि पढ्नुस ताप्लेजुङ्गमा एकघण्टाको लागि मतदान स्थगित
नेपाली कांग्रेसका नेता डा रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसीले नुवाकोटबाट मतदान गर्दै छन् भने सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेतले सिन्धुपाल्चोक, कांग्रेस नेता बलबहादुर केसीले सोलुखुम्बु र युवा नेता रामहरि खतिवडाले ओखलढुंगाबाट मतदान गर्दै छन् ।
पश्चिम रुकुमका प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले रुकुम मुसिकोट नगरपालिका–५ स्थित यमुनानन्द नमूना उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट मतदान गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस मतपेटिका राखेको कोठामा तीनवटा ताल्चा झुड्याइयो, बाहिर काँडेतार
त्यसैगरी माओवादीका नेता अग्नीप्रसाद सापकोटाले सिन्धुपाल्चोकबाट मतदान गरिसकेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता चीनकाजी श्रेष्ठले गोर्खाको आरुघाट गाउँपालिकास्थित भीमोदय उच्च मावि मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्दै छन् ।
त्यसैगरी एमालेका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले लमजुङको बुद्धोदय मावि केन्द्रबाट मतदान गर्दै छन् । एमाले युवा नेता यज्ञराज सुनुवारले पनि ओखलढुंगाबाट मतदान गर्दै छन् ।
ट्याग्स: First Phase Election, Top Leader